बिदेशबाट फर्केका युवाको यस्तो उद्योग । | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » News, बिबिध, सम्वृद्धि यात्रा » बिदेशबाट फर्केका युवाको यस्तो उद्योग ।
Posted by Itahari Fm | error | ६२७ पटक
देशकै उदाउदो शहर इटहरीमा उद्योग धन्दा र ब्यपार फष्टाइ रहेको छ । बिभिन्न उद्योग संगै पछिल्लो समय इटहरी जुता उद्योगको पनि संख्या बढि रहेको छ । खासमा इटहरीमा कस्तो क्वालिटीका जुत्ता बनी रहेका छन ? काहा बिक्री भैरहेका छन् ? ब्यबसायको लगानी र जोखीम कस्तो छ ? यी बिषयमा आज हामीले इटहरीको नामी जुत्ता चप्पल कारखना सगरमाथा फुट वयरका सन्चालक योगेस नेपाली संग कुराकानी गरेका छौ । इटहरी एफ.एम.को कार्यक्रम जिनेस टककालागि रमेश पौडेलले गरेको कुराकानीको संम्पादीत अंश यहा प्रस्तुत छ ।
सगरमाथा कसरी नामकरण भयो ?
विश्वको सर्बाच्च शिखर सगरमाथा जसरी विश्वमा चिनीएको छ । त्यसै गरी मेरो जुता चपलले पनि विश्वमा चिनीयोस भन्ने उदेश्यले राखिएको नाम हो । यसको नाम जस्तै राम्रो गुणस्तर पनी छ वलीयो, लाउन सजिलो, नेपाली डिजाईमा । जस्तै ढाकाको कपडाको प्रयोग गरेर नेपाली कला सस्कृति लाई झल्काउने डिजाईन आकार दिएर साना देखि ठुला सम्मका व्यतिmहरुलाई फिट हुने जुता चपल सगरमाथा फुट वयर बाट खुद्र तथा होल्सेल बिक्री बितरण गर्दै आएका छौँ ।
यो व्यवसाय गर्नु भन्दा अगाडि के गर्नु हुन्थ्यो ?
यो जुता, चपलको व्यवसाय गर्नु भन्दा अगाडि म चार बर्ष बैदेशिक रोजगारमा काम गरेर त्याहाको धेरै कुराहरु सिपहरु र केहि मात्रामा धन कमाएर आफ्नै देशमा आएर केहि गर्छु भन्ने उदेश्यले जुता, चपलको व्यवसाय थालेको हो । र अहिले सोचेजस्तै स्टाफलाई दिएर आफ्नो खर्च कटाएर राम्रो किसीमको मुनाफा कमाइराखेको छु ।
जुता बनाउदा कच्चा पदार्थ केके लाग्छ ?
हाम्रो पुर्खैली पेसा नै हो जुता बनाउने । मैले पनि यहि पेषा थाले, पहिले पहिले मरेका गोरुको, गाईको बिभिन्न जनावारको छाला काडेर माटोमा खाडल खनेर गाडेर त्यसमा नुन लाएर विभिन बनस्पतीको बोक्रा लगाएर कलर निकालेर जुता बनाईथ्यो । तर अहिले यस्तो जमाना छैन हरेक कुराहरु मेसेनेरी भैसकेको छ । हरेक कुराहरु रेडिमेट पाउछ । छाला पनि रेडिमेट बाहिर बाटै आउछ । सुल पनि बाहिरबाटै आउछ । ६०५ भारत बाट आउछ र ४० ५ चाईना बाट आउछ ।
अन्य कमपनिका पनि जुता चपलहरु थूप्प्रै छन् । तिभन्दा के फरक छ सगरमाथा ?
सर्बप्रथम त यो नेपनलमै उत्पादन हुन्छ । अन्य भन्दा बलीयो पनि छ । नेपाली डिजाईमा बनाईछ । अन्य ठुला ठुला कम्पनीले नेपाली इस्टिकर हालेर चाइनामा जुता बनाउने र नेपालमा बेच्ने गर्छन् । हाम्रोमा त्यस्तो हुदैन । मैले बेचेको जुतामा वारेन्टी पनि पाईन्छ । अरुको जस्तो मेसीनले बनाउदैन हाम्रोमा हातैले बनाउछौँ ।
जुता चपल आफैले उत्पादन गर्दा के कस्ता समस्या आउछन् ?
सबै भन्दा धेरै कालीगणको समस्या हुन्छ । अहिले मेरैमा पनि धेरै जस्तो कालीगण भारतीय छन् । अहिलेको जेनेरसनमा मैले पाएको कुरा उनिहरु सिप सिक्न चाहादैनन् त्यस कारणले गर्दा पनि कालीगणको समस्या हुन्छ । हाम्रो देशमा जातिय बिभेद भएको कारणले गर्दा पनि यो सिप सिक्न चाहादैनन् । राज्यले हरेक बर्ष तालीम दिनको लागी बजेट छुट्याउछ र तालीमहरु आयोजना गर्छ । हामिले पनि कति ठाउँमा तालीम दिएका छौँ । तर तालीम दिने सस्थाले २ महिने ३ महिने तालिमहरु हुन्छ तर एसो तालीम गरे जस्तो मात्र । त्यस तालीमको केहि उपलब्दी छैन । राज्यको पैसा खाने काम मात्र भैराखेको छ ।
जो तपाईजस्तै केहि व्यवसाय गर्र्न खोजीराख्नु भएको तर नसकिराख्नु भएको व्यतिmलाई व्यवसाय गर्न के सलाहा दिनु हुन्छ ?
व्यवसाय भनेको यस्तो कार्य हो आफुसंग जोडिएका व्यतिm संगसगै उबो लाउने काम गर्छ । अहिलेका जेनेरेसनका यूवाहरुलाई पनि बिदेश जानु भन्दा पनि यहि केहि गर्नु भन्छु । आत्मा बिस्वास हुनुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ । अवस्य पनि सफल बनिन्छ ।